Ketamine iyo teraabiyada cilminafsiga waxay caawin karaan khamriga • Drugs Inc.eu
Bogga ugu weyn Daroogooyinka Ketamine iyo teraabiyada cilminafsiga ayaa caawin kara khamriga
albaabka Ties Inc. January 18 2022
maqaal by Ties Inc. January 18 2022
Khamrada aadka u cabba waxay muddo dheer ka fogaayeen khamriga markii lagu daweeyey qiyaas yar oo ketamiin ah iyo daawaynta cilmi nafsiga, daraasad ayaa muujisay. Aqoonyahanada jaamacadda Exeter ayaa sheegay in isku darka ay dadka ka hor istaageen in ay mar kale khamri cabbaan mar dhow.
Jaamacaddu waxay sheegtay inay la shaqaynayso Adeegga Caafimaadka Qaranka (NHS) si loo eego sida daawaynta loogu fidin karo bukaannada. Ketamine waa daroogo heerka B ah oo sharci darro ah in loo isticmaalo madadaalada.
Khubarada caafimaadka iyo aqoonyahannada Devon ayaa hadda eegaya sida teraabiyada cilminafsiga loo gaarsiin karo bukaannada. Prof Celia Morgan, oo ka tirsan Jaamacadda Exeter: "Ketamine waxay saameyn ku yeelataa saacado gudahood halkaas oo daawada lidka diiqadda ay ku qaadato laba toddobaad inay shaqeyso. Si kastaba ha ahaatee, saameyntu maaha mid sii raaga."
Daawaynta oo ay weheliso ketamiin
Maamulka qadar yar oo ketamiin ah oo lagu daro daawaynta ayaa sii dheeraynaysa saamaynta. Waxa ay daawaynta ka dhigtaa mid qaali ah marka hore, laakiin haddii saamayntu ay sii raagto waxa ay kayd weyn u tahay NHS-ta.
De daraasadda waxaa ka mid ahaa 96 qof oo qaba dhibaatooyinka khamriga oo ka aamusay wakhtiga maxkamada. Ka qaybgalayaashu waxay cabbeen maalin kasta, celcelis ahaan, waxay cuneen wax u dhigma 50 pints oo biir xoog leh wiigii (125 unug). Kooxdu waxay ogaatay in dadka helay ketamiin oo lagu daray daawaynta ay si buuxda u miyir beeleen 162 ee 180 maalmood muddada lixda bilood ah ee dabagalka, taas oo u dhiganta 87% heerka diidmada. Daraasada ayaa lagu daabacay joornaalka Maraykanka ee cilmi nafsiga. Rugta daaweynta cilminafsiga ee caawimada ketamine-ka ee UK ugu horreysay ayaa laga furay Bristol bishii Maarso 2021.
Akhri wax dheeraad ah bbc.com (Source, EN)
khamrigadaroogadaketaminecilmi baarisdaraasaddaBoqortooyada Ingiriiska
Isticmaalka HHC ma waxay caawisaa bogsashada…
Switzerland waxay tijaabisay iibinta xashiishadda sharciyeed ee madadaalada
Saamaynta placebo ma waxay keentaa faa'iidooyinka…
Sharciyeynta xashiishadda: aaway xashiishadda sharciyeed ee...
Baarayaasha UK waxay ku duraan musqulaha...